I-China T-bolt clamp Umvelisi kunye neefektri | Iglasi
I-T-bolt clamps zibonelela ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo ukutywinwa ngokutywini kunye noxinzelelo oluqinileyo lokutywina kunye nokuqina okuhle.
Ukupakisha okuqhelekileyo yingxowa yeplastiki, kwaye ibhokisi engaphandle yibhokisi. Kukho ileyibhile ebhokisini.Sokufakelwa okukhethekileyo (ibhokisi emhlophe ecacileyo, ibhokisi yomculo, ibhokisi yemibala, ibhokisi yeplastiki, njl. Njl.)
I-T-bolt clamp isetyenziswa ngokubanzi kwindawo ephezulu ye-vibration kunye nokusetyenziswa kwesangqa esikhulu njengelori enkulu, ishishini, izithuthi, ukunkcenkceshela kwezolimo kunye noomatshini.
I-T-bolt clamp isebenzisa izakhiwo ezahlukeneyo kunye neenkqubo zokwenza izinto ukuhlangabezana neemfuno zeentlobo ezahlukeneyo ze-hoses kunye nemibhobho yensimbi. Banamandla aphezulu apheleleyo, ukusetyenziswa okulula kunye nokuqinisa okuqinileyo.
Edlulileyo: Ukunyibilika kwembiza yokuntywila
Okulandelayo: Ikhampasi yehose engavuthwanga yecuba